Nloghachi nke Nwa Atụrụ ke 2016! | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Otu Chineke, onye Earth, onye People.
The Bible na-agwa anyị na Chineke « bụ » nakwa na ọ kere eluigwe na ala, ụwa na mmadụ.
Dị ka kalenda ndị Hibru anyị ga-afọ a 2016, ndị 5777 nke afọ nke ihe e kere eke nke a kpọrọ mmadụ site na Chineke.
Gịnị na-ekweta aga megide ndị ọkà mmụta sayensị pseudo-egosi site n’ịkpọ ndi mmadu ihe karịrị otu nde afọ.
Kemgbe ụwa, ndị Bible na-akụziri ndị mmadụ na-a na eri nke ịdị n’otu n’etiti Chineke na ndi mmadu.
Ewoo, nwoke kama na-bịarukwuo Chineke nso site ozizi a anọgidewo na-pụọ.
N’agbanyeghị ozizi ndị Bible, ọtụtụ ezighị ezi pụta n’elu akụkọ ihe mere eme nke mmadụ. E nwere anyanwụ na-efe, ọnwa na spooky myiyi chi.Men ọbụna adored dị ka chi na ihe nlereanya nke ndị fero.
Ma onye nke ụwa nke oge a bụ ọbụna n’ihu ndị ịkparị Chineke! The mmadụ nanị jụrụ ya kere ma ọ bụ ka njọ nwoke eme dị ka ma ọ bụrụ na Chineke adịghị.
Ya mere, Chineke adịghị ugbu a na uche nke mmadụ n’oge a, nwoke adaba ndap nke ịghọ chi.
France n’agbanyeghị Clovis na Joan nke Arc, anọgidewo na-iwe Chineke ofụri akụkọ ihe mere eme (mgbuchapụ nke ndị Protestant na St. Bartholomew, amoosu hunts, njide na executions nke Templars na Jeanne Arc etc ..) na France emesịala tọhapụrụ Chineke nke ala n’oge 1789 mgbanwe.
The Republic ka chọrọ iji ụgbọala Chineke si ndụ nke France na 1789 na anyị na-ahụ ebe ọ na-emecha na-eduga.
227 afọ mgbe e mesịrị, France-emebi, wakporo napu ya ihe o nwere site na ndị a pseudo-udo mwakpo ndị na-nabatara dị ka ịrịba, nyere aka,-chọpụtara, nri, lekọta free, ọbụnakwa kwụọ ụgwọ kwa ọnwa site ụtụ isi anyị!
Ma ndị French ndị yiri ka na-ebi « na ịda ogbenye » ​​n’agbanyeghị ihe mgbe na-egbu mgbu ọrụ na ibu ihe dị arọ ji obere ezinụlọ mmefu ego,« na nhụsianya » mgbe gburu-enweghị ọrụ.
Na ezumike nká na ha bụ ihe kasị mma na precarious na ke kasị njọ na nhụsianya mgbe ogologo-arụ ọrụ ndụ na-emekarị nnọọ na-egbu mgbu.
The French ndị mmadụ na-stigmatized na ikpe anọghị ná nchebe na nhụsianya maka abamuru nke ndị a si mba ọzọ mwakpo ndị ha na ha na-amanye gọọmenti ibikọ ọnụ.
Nke a ndụ set nwere a na-eri ma na ọ bụ French ndị mmadụ na-akwado ya na-akwa mgbu « Ụtụ Isi, ụtụ isi, ụgwọ na ebubo bụ mgbe niile ọzọ dị mkpa, mgbe na-elekọta mmadụ uru ibelata ruo n’ókè na French ndị mmadụ nwere isi ike dị ukwuu ọgwụgwọ.
The president François Hollande nwere ọbụna, ọ dịkarịa ala ahụ n’akwụkwọ ya bụbu-ukwu, kparịa ndị ya site na-akpọ ha: « The toothless ».
A okwu ihere, ihere, ihere na mkparị bụ otú a ngosipụta nke eziokwu, n’ihi na ọ bụ eziokwu na ndị French ike ịgwọ n’ụzọ kwesịrị ekwesị.
The na-eri nke eze na-elekọta na eze na-abụkarị ndị prohibitive nye ndị bi na ịda ogbenye na nhụsianya, ha bụ n’ezie mgbe toothless Nigeria.
Site megide ndị a agwọ ọrịa na eze bụ free ndị a niile si mba ọzọ mwakpo!
Anyị na Ndị Kraịst na-aghọta na ọ bụ na-anọghị nke Chineke na ndu France na-edu anyị ka a apocalyptic ọnọdụ.
Na-eme ka anyị ghọta, Chineke chọrọ a si mba ọzọ « mwakpo » ahụ si na okpukpe nke lucifa « Islam. »
Dị ka anyị na-ahụ ụbọchị ọ bụla anyị na-ebi na ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ ha ga-akwụsị mgbe nloghachi nke Onyenwe anyị na King Jesus Christ.
M nwere nnukwu nchekwube na nke a n’ihi na ọnwa nke September ma ọ bụ ọnwa nke October 2016
Ma anyị aghaghị ịghọta na m na-ama na-ezighị ezi na m nwere ike ewepu na a aka m na-ezighị ezi.
Ewoo, anyị nwere ike na-eche a ole na ole ruo iri afọ nloghachi nke Jehova.
Ma m nwere olileanya na ọ bụghị n’ihi na ihe mgbu na-malitere (ya bụ-apụghị ịgbagha agbagha) na ha tie ji oké agha ebe ọ bụ na 29 September 2008.
Anyị makwa na ihe ha ga-njọ-esiwanye ike ka ha laghachi ebube Jesus Christ ebe ọ bụ na ya lọta ga-abụ dị ka ihe mgbu nke ịmụ nwa.
Ya mere, ihe mgbu nwayọọ nwayọọ nwere ike na-aka njọ karị!
Ọ bụrụ na Jizọs Kraịst ga-afọ a 2016, anyị ga-adịghị anya ga-esi hapụ a niile mgbu nke ndụ. Ọ bụ ya mere oké mkpa ịnọgide na udo na Chineke site n’ekpere na-arịọ maka mgbaghara mmehie kwa ụbọchị maka mmehie anyị, anyị na-emejọ, ihe ọjọọ anyị mere, anyị omume ọjọọ na anyị ghara ịdị ọcha echiche.
Anyị nwere ná ndụ anyị mata anyị Christian ụkpụrụ site n’inyere ndị niile na-ajụ anyị maka enyemaka gụnyere ndị a wakporo.
Ma, anyị aghaghịkwa iji chebe anyị omenala, akụkọ ihe mere eme anyị, anyị ụkpụrụ na mba anyị France.
Cheta na m na-ekwu maka France bụ irè n’ihi na mba ọ bụla na Europe na-wakporo dị ka ma ọ bụrụ na anyị na-asụ asụsụ, anyị akụkọ ndị dị na anyị mba dị iche iche, anyị Christian okwukwe bụ.
M ga-dokwuo anya na ọ bụ adịghị ike nke anyị ọchịchị na-agba ume nile ndi di iche iche na ọpụpụ na-abịa bụghị naanị site na Syria ma si gburugburu ụwa na-achọ ndụ ka mma na Europe na karịsịa ke France.
Ikpeazụ tupu nlọghachi Jesus Christ ga-anọnyere ndị toughest definition nke ndi mmadu. Anyị aghaghị ikpe ike n’ihi na ihe niile a ga-arụ nke afọ a, 2016.
Nke a doo nnọọ nta oge iji mee ka ndị kasị ukwuu ọtụtụ mmadụ na-Christ site na baptism.
Ọ na-eleghị anya n’ihi na baptism a ga-achụrụ niile akwaga mba ọzọ na Chineke zitere ha na Europe. Ya mere, egbula gwa Abigel baptism ndị niile ịrịọ gị maka enyemaka.
Na-eche na ọ bụrụ na Chineke chọrọ, anyị nwere ike ịbụ na ebe ndị si n’ezinụlọ niile nke ekupụ.
Adị umeala n’obi ma na-ekele Chineke maka ịhụnanya na-edu anyị n’agbanyeghị mmehie anyị, anyị na-emejọ, ihe ọjọọ anyị mere, anyị omume ọjọọ na anyị ghara ịdị ọcha echiche.
Ewoo, ọ bụrụ na Jizọs Kraịst bụ adịghị abịa ngwa ngwa na ya laghachiri e mesịrị, otú ahụ ka anyị ga-nsogbu bụ isi na 2017.
Nke a ga-president ntuli aka France na onye ọ bụla na ya akọ na uche ga-aga votu nke nwa akwukwo nke ha nhọrọ.
Ọ ga-o ga-maara na Republic bụ onyinyo nke onwe ya na ya ọbụbụeze a machiri ekike na akwụkwọ ego.
Mmetụta na mmetụta nke France na ụwa périclitent esiwanye ebe ọ bụ na General De Gaulle.
Ọ bụrụ na ọ dịghị ihe a na-eme ka kpamkpam kwụsị ma laa azu mbuso agha, na-abịa afọ ga-French nta Kraịst na Republic ọ bụrụ na ọ ka dị ma ọ dịkwaghị ego na Koranic mgbanwe a ga-enwe democratically na ntuli aka.
Ndị ọchịchị machibidoro iwu-ekwu eziokwu ndị mmadụ. Ya mere, ọ dịghị ọnụ ọgụgụ na eze na-adị na ọnụ ọgụgụ nke French Alakụba ma onye ọ bụla pụrụ ịhụ ke kpukpru obio, n’akụkụ nile nke obodo ahụ na islam obodo bụ esiwanye mkpa na France na Europe.
Na O doro anya na ọ dị mkpa nke ndị a obodo karịrị akarị!
Nkwado na ntuli aka ndị a enweghị ụkpụrụ atumatu nke Islam Mbugharị ọ ga-pụọ Faith, Christianity na Jesus Christ.
Onyeikpe na ikpe-akwaga mba ọzọ ga-pụọ Faith, Christianity na Jesus Christ.
Ma echefula na ọrụ ebere-amalite na onwe ya na otu onye anyị ga-aka.
Ya mere, ihe ọ bụla na mkpebi mere ka anyị na hoputara ọchịchị ndị a nile mee mwakpo-akwaga mba ọzọ, anyị ga-hụ na mkpebi na-etinyere na ịhụnanya na Christian ọrụ ebere.
Mgbe ndị ekweghị ihe Chineke, si « humanists » na ha bụ nchegbu banyere akara aka nke ọzọ dị ka ha onwe ha aka na akara aka nke mkpụrụ obi ha.
Ọ bụ ya mere o yiri na mgbe president ntuli aka, ihe ọ bụla nhoputa okwu na nkwa, migratory aga-anọgide na-ekpochapụ Europe ma karịsịa na France.
Otu na-akpatara mgbe niile na-emepụta otu mmetụta, na Islamists nọ n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ, ha ga-eme ya na Europe.
Ime ihe ike, agha obodo na okpukpe agha ga-ya mere na-enliven ilu kpara mgbe French president ntuli aka. Ọ bụrụ na ọ bụghị tupu !!!
N’ụwa ebe ndị Pope onwe ya ka furu efu okwukwe ruo aghọta okpukpe nile dị ka ezi ndị na dị ka ụzọ na-eduga na Chineke, n’ihi ya, ọ bụ ihe kwere nghọta na ọtụtụ n’ime ụmụnna anyị bụ ndị nọ na ezi pụtara okwukwe na-esiwanye nanị.
Nanị na-aghọ esiwanye nnwere onwe anyị. N’oge na-adịghị anyị ga-enweghị nnwere onwe na-akatọ ihe niile omume megide Kraịst anyị okwukwe, megide chọọchị anyị na imegide ime ihe ike na anyị na ụmụnna ndị nọ France na ndị fọdụrụ nke ụwa.
Ya mere, ụmụnna mm hụrụ n’anya na ụmụnna nwanyị, m dere akwụkwọ abụọ na n’ọnụ ụzọ mbụ na aha nke blog aha. « The nkwusa nke Nlaghachi nke King » na subtitled « Site ọchịchịrị abịa ìhè » Akwụkwọ a na akụkụ mbụ na-egosi ịdị adị nke Chineke na-akọwa ihe mere ya ọtụtụ kere eke nke nwoke na ihe ga-eme ndị na ndị na-họọrọ ịgbaso uche Chineke. Nke abụọ nke akwụkwọ a ụfọdụ m isiokwu m na-ewere dị mkpa na-azọpụta a kwere omume mmechi nke blog megide uche m.
Nke abụọ n’akwụkwọ na aha « France, Civilization na Republic ebugharị » na onye sobtaitel bụ « The Nkwusa ejila nke King » kọwara na akụkụ mbụ otú anyị eduhie na-arara ya nye akụkọ akara fatidiquement ịchọta onwe anyị na njedebe nke oge na ohu. Ọ na-akọwa otú France pụrụ inweta na a ịrụ, « a nloghachi nke Eze France, » ma ọ bụrụ na nloghachi nke Jesus Christ a ga-eme na a ole na ole ọtụtụ iri afọ. Nke abụọ nke akwụkwọ a nakwa dere ụfọdụ m isiokwu m nakwa atụle mkpa iji zọpụta a kwere omume mmechi nke blog megide uche m.
Ihe ọ bụla merenụ, nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst bụ maka anyị na ọgbọ, ọ bụ nnọọ kpọmkwem! Na ọ dịghị ata ahụhụ na ndò nke a doro anya!
Ma Bible na-agwa anyị na mgbe Jizọs Kraịst ga-alaghachi na ezi okwukwe nke nta ka n’anya na Ụwa.
Ya mere, ọbụna ma ọ bụrụ Obi siri m ike ịdị nso nke nloghachi na promptness nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst maka afọ 2016, nke bụ eziokwu bụ na m nwere ike na-ezighị ezi na na ma akwụkwọ ga-enyere gị aka n’ihi na naanị Chineke maara ihe mba dị ike nke na-Faith.
Anyị na-ahụ na-ahụ na ebe ọ bụ na 2008 Christianity ka rịdata n’ime hell. Anyị na ụmụnna na-egbu n’ụwa nile na n’ozuzu enweghị mmasị anyị hoputara ọchịchị. Anyị na-ahụ na Islam buso Kraịst.
The September 27, 2015 Pope Francis ka ọbụna gọrọ agọ Jesus Christ ke Katidral St. Patrick na US, Ẹkot ka otu ukara nkwupụta nke ọnwụ nke ndị Katọlik na chọọchị mere site Pope Francis, bụ ndị nwere ama esịn àgwà nke ọrụ papal mgbe họpụtara March 13, 2013.
Anyị na-ahụ na ihe oge na-aga, ka anyị na « Kraịst » na-kpoputara na-etinye na n’ọdụ ụgbọ mmiri ahụ.
ọchịchịrị N’ọdịnihu, n’ihi ya, m kpebiri na m dee akwụkwọ abụọ ahụ ga-abụ bara uru iji kwadebe nwekwara uche nzukọ ma ọ bụ na nzuzo site mkpa ka Ndị Kraịst oge mbụ ma ọ bụ ị pụrụ ọbụna ozi ọma na ọzọ ruo nlọghachi nke Onyenwe anyị.
Na-enwe olileanya Otú ọ dị, nke a abụghị mkpa yana na oge a bụ ezi ihe na ihe na Jizọs Kraịst bụ n’ezie azụ nke afọ a 2016 maka ọnwa nke September ma ọ bụ October, m na-eche na oge nke mmemme nke opi n’etiti 03 na October 4.
Akọwaara m ha na blog nke ikpeazụ izu nke Akwukwọ Nsọ njedebe nke oge, a oge nke afọ asaa ahụ e buru n’amụma site Daniel onye amụma ụfọdụ 600 afọ tupu mbụ na-abịa nke Jizọs Kraịst.
The gara aga afọ asaa na-emechi na njedebe nke oge, bụ ntaramahụhụ Chineke. Ọ na-e kwuru na amụma na nke a oge nke afọ asaa mejupụtara abụọ ugboro atọ na ọkara afọ na na n’akụkụ nke abụọ atọ na ọkara afọ, ihe mgbu ga-abụ nnọọ chawapụrụ.
Ka m mara ọkwa na m isiokwu nloghachi nke Jizọs Kraịst Ka 14 ma ọ bụ 15 September 2015! N’oge na-mme nke opi nloghachi nke Jesus Christ ama itinye aka na njedebe nke afọ asaa nke mkpagbu, na mmalite m odude ka 29 September 2008 na-esonụ na ngwaahịa ahịa okuku nke Wall Street n’ihi na ike bụ iburu n’obi na kemgbe ahụ niile akpọsa ihe ịrịba ama na amụma nke nloghachi nke Jesus Christ na-ewere ọnọdụ na ihe na ọzọ ike na ịdị ukwuu.
Nloghachi nke Onyenwe anyị na-etinye aka iji September ma ọ bụ October 2015. Ma anyị niile hụrụ na ọ bụ a ndudue. Ma ihe mgbu dị adị na-eto eto ebe ọ bụ na 29 September 2008.
The njehie Echere m na m mere site ghara ewere n’ime akaụntụ na amụma ahụ e kwuru okwu ugboro abụọ atọ na ọkara afọ.
Emesịrị m ghọta na ọ bụrụ na amụma ahụ kwuru ugboro abụọ atọ na ọkara afọ bụ a nwụrụ anwụ oge n’etiti abụọ oge atọ na ọkara afọ.
Akpa oge ahụ biri na March 2012 site a nnukwu ịrịba ama nke bi n’eluigwe nke na-mwute ikwu na e leghara ha anya dị ka ọ bụ disproportionate na-atụghị anya: Spanish asụsụ video.
Nke abụọ nke atọ na ọkara amalite m na uche na nhọpụta nke ndị Pope Francis 13 March 2013 na o doro anya na ihe mgbu ga-anọgide na njọ esiwanye na ebe niile.
Atọ na ọkara mgbe March 13, 2013-eweta anyị September 13, 2016!
Ya mere, anyị ga-ama na-ekweta. The analysis nke ihe ịrịba ama niile na amụma ndị a kpọrọ aha na Bible iji gwa ya na nloghachi nke Jesus Christ na-ekpughe na ogologo ndepụta nke ihe nile di iche iche na anyị bi on Earth.
Ọdachi, ala ọma jijiji, ọkụ ọgbụgba, oké mmiri ozuzo, oké ifufe, ifufe, Exodus, ntiwapụ nke ọrịa, ụnwụ nri, ime ihe ike, agha na asịrị agha, iyi ọha egwu, ọnwụ nke ụkpụrụ, ọtụtụ ọnwụ nke azụ, nnụnụ na anụ ọhịa na anụ ụlọ enweghị nkọwa bụ kwa ndụ nke na mbara ala na ndi mmadu. Ihe omume ndị a na-ebu amụma ịkpọsa nlọghachi nke Onyenwe anyị na King, Jesus Christ nanị nwa nwoke nke Chineke na-abịa ibu eze on ụwa ruo otu puku afọ na-abịa ruo mgbe doomsday.
Ee iju dị ka o nwere ike iyi anyị bụ ma eleghị anya na-aga izute Onye kere anyị.
Achọrọ m ịkpachara anya ma na-ekwu ma eleghị anya, na-ekweta na m dị ka ma eleghị anya ozugbo na njehie.
Abụghị m onye amụma na i maara na otú ahụ ka m na-enweghị ihere na-ekweta ihe dị njọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na Jesus Christ hapụrụ anyị ịrịba ama bụ ime ka anyị leba anya na-eche na-enye anyị ike anyị na olileanya dị mkpa iji merie ihe isi ike ndị metụtara njedebe nke oge.
Nke ahụ bụ ozi ọma nke nloghachi nke Onyenwe anyị.
Ma i nwere ike iche na ọ bụrụ na e ozi ọma, e nwekwara akụkọ ọjọọ.
The mbụ akụkọ ọjọọ bụ na-abịa ọnwa na-aga na-nnọọ siri ike dị ka anyị na-edu nnọọ nso na ụbọchị nke nloghachi nke Jesus Christ na na ikpeazụ ga-abụ hardest. Ha ga-abụ oge nke ụbọchị nke iwe Chineke.
Ọ bụ ya mere nnọọ mkpa na-abịa ọnwa na-adị nnọọ uchu na ekpere, ka mgbaghara mmehie na nchegharị. Mgbe o nwere ike ịbụ akaha !!!
Nke abụọ akụkọ ọjọọ bụ na amaghị m ma ọ bụrụ na owuwe nke ụka ga-mgbe oge rurula ma ọ bụ tupu oge ụbọchị nke iwe Chineke.
Ekpe ekpere ụmụnna mm hụrụ n’anya na ụmụnna nwanyị nke mere na nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst abụghị nke uru egbu oge n’ihi na ihe mgbu ga-abụ ihe egwu nke ọtụtụ n’ime anyị.
Otú ọ dị, anyị nwere ike ịbụ na n’agbanyeghị na correctness nke m analysis mere ka ichere afọ ole na ole nloghachi nke Onyenwe anyị na tupu m ịrịọ mgbaghara.
The ụzọ nke Jehova bụ, na m chọpụtara, mgbe mgbe impenetrable!
Ọ bụrụ na anyị na-eche a ole na ole ọtụtụ iri afọ ọ ga-abụ nnọọ ike na m ise gị anya nke bu eziokwu na ụgha ahụ na-eso ụzọ onye mmegide nke Kraịst bụ ọtụtụ ibu karịa ha apụta, na m agba gị na-ele a video on a blog page: » HERE « ka nweta ihe echiche nke ịdị ukwuu nke ụgha na anyị na-atachi obi maka afọ na afọ nke Ụwa.
Hụrụ n’anya ụmụnna ndị nọ Christ Jesus kpọ m gị oku ịtụ m na akwụkwọ na-Edilivre abụọ mbipụta.
Chineke na-agọzi gị ma na-edebe ị na-nri na omume ọma n’okporo ụzọ nke ịhụnanya, udo, ikpe ziri ezi, ọmịiko na ịdị umeala n’obi na anyị deere Jesus Christ na-eduga site ya Chineke.
N’ihi na a mma nghọta nke ihe na-echere ndi mmadu, M agba unu ume na-agụ m isiokwu nloghachi nke Jizọs Kraịst maka September ma ọ bụ October 2016
The Jewish mme nke opi a ga-enwe on 03 na October 4, 2016 kwesịrị iju anyị niile na ihu nke Ụwa …. !
Ụsụ A, 2nd Floor
Na-emechi isiokwu a, achọpụtara m na telivishọn na ihe egwu na-e ka na-kụrụ ọtụtụ ezinụlọ na bombings na Belgium.
M ịgba akaebe n’ebe a m miri emi mwute na-agba ndị niile na ụmụnna mm hụrụ n’anya na ụmụnna nwanyị nọ Christ ikpe ekpere maka ndị e mesoro mpụ na ndị ezinụlọ ha.
-Adịghị ege asì, kama na ha despicable omume ime ka anyị na-aghọta na-eyi ọha egwu ebu ha egbu n’aha a Chineke ha na-akpọ Allah!
Islam bụ okpukpe nke lucifa na ebe ya inception na Islamists ekwu okwu nke Ịhụnanya na ngwá agha na aka!
Na-ekwu na ndị Pope nọgidere na-enwe na okpukpe nile na ezi na ha bụkwa ụzọ Chineke!
Echefula maka oge na Jizọs Kraịst kwuru, sị :
« Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ; ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma site m! «
Chineke na-agọzi gị.